Shaqo joojinta dhakhaatiirta dalka Kenya oo gashay maalintii saddexaad iyo daryeel xumo soo wajahday Isbitaalada Dowlada Kiinya!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Shaqo joojinta dhakhaatiirta dalka Kenya oo gashay maalintii saddexaad iyo daryeel xumo soo wajahday Isbitaalada Dowlada Kiinya!!
Shaqo joojinta dhakhaatiirta dalka Kenya oo gashay maalintii saddexaad iyo daryeel xumo soo wajahday Isbitaalada Dowlada Kiinya!!
Shaqo joojin ay sameeyeen dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee dalka Kenya ayaa maalintii saddexaad gashay maanta waxayna arintaan saameyn weyn ay ku yeelatay howlaha adeegaa caafimaadka guud ahaan dalka Kenya bukaankooda.
Xaalada isbitaalada dalka Kenya ayaa meel halis ah gaartay kadib markii ay dowlada Kenya ay ku guuldareysatay in ay heshiis la gaarto ururka dhakhaatiirta dalka Kenya.
Wadahadalo ay wada galeen dowlada Kenya iyo ururka dhaqaatiirta ayaa ku dhamaaday guuldaro kadib markii ay diideen ururada dhakhaatiirta qorshe loo soo bandhigay oo sare loogu qaadayo mushaaraadka boqolkiiba soddon waxayna ku adkeysanaayaan dalabkooda in ay ka helaan xukuumada kiinya.
Inkabadan toban ruux ayaa ku dhimatay isbitaalada dowlada tan iyo markii ay bilaabeen shaqo joojin dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha dalka Kenya.
Wasiirka Caafimaadka dalka Kenya Cleopa Mailu ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan sidii ay xal kama dambeys ah ula gaari lahaayeen ururada dhakhaatiirta oo shaqo joojinta bilaabay.
Inkabadan labo kun oo dhakhaatiir ah ayaa ka bilaabay dalka Kenya shaqo joojin iyadoo shaqo joojintan ay ku dalbanayaan in loo kordhiyo mushaaraadka isla markaana dowlada Kenya ay hirgeliso heshiis ay gaareen sanadkii 2013.
Previous PostMuuqaal laga soo duubay Qandala iyo Masuuliyiinta Puntland oo ka jeediyey Hadalo yaab leh markay galeen DAAWO!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Ciidanka Puntland oo Qabsaday QANDALA iyo Halkay uga baxeen mintidiintii Daacish ee Qabsaday Qandala in yar riro ahaan lagu qiyaasay 80 ayay ahayen!!